Insika – The Ulwazi Programme
Insika ilibamba lendlu ukuthi ingawi, igxunyekwa phakathi nendlu ikakhulukazi endlini karawondi. Indlu karawondi yindlu yesintu ekuthiwa yilapho kuhlala amahdozi akulowomuzi noma ngabe kushiswa impepho kuvamise ukuthi kushiselwe khona. Lapha sigxile kakhulu ngokubaluleka kwayo insika. Insika isiza ukuthi kuhlukaniswe izindawo zokuhlala nezokulala ngobulili. Kuthiwa insika yenza umuntu wesilisa nowesifazane bayazi indlela ekufanele bahlale ngayo noma baziphathe ngayo.
Kodwa lokhu kwenzeka ezindaweni zasemakhaya kukhona lapho kusahlonishwa khona kodwa kwezinye izindawo lokhu akusalandelwa. Abantu besilisa bahlala ngasesandleni sangakwesokudla kuthi abesifazane bahlale ngasesandleni sangakwesokunxele. Kuthiwa lolusiko lwaluhlonishwa kakhulu futhi kwenzelwa nomuntu ukuthi ayazi indawo yakhe ekhaya. Phela kuthiwa umuntu wesifazane wayehlonipha noma eganile noma engakagani. Wayefundiselwa ukuthi uma esegana ayazi indawo yakhe emzini. Uma kwenzekile umuntu wesifazane kwaba khona into ayifunayo ngasohlangothini lwabantu besilisa wayethumela ingane ukuthi imenzele lokho.
Noma ngabe balele kuthiwa umuntu wesifazane wayelala ngasohlangothini lwesinxele. Phela lolusiko lwalwenzelwa ukuthi umuntu wesilisa uyinhloko yomuzi kufanele agade futhi avikele umndeni uma kukhona umuntu ozongena endlini aqale kuyena kube uyena ombonayo. Lokhu futhi kwakwenza kubelula ukuthi abantu bahlaselana ngoba kwakwaziwa ukuthi abantu besilisa batholakala ngakoluphi uhlangothi mhlawumbe uma kunezimpi zezigodi.
Kuthiwa amadlozi uma efika ebusuku evakashile kufanele afike umuntu elele endaweni yakhe. Uma uwumuntu wesilisa ulala kwesokudla uma efika evakashele wena baba wekhaya azofika ngasohlangothini lwakho. Nomuntu wesifazane azofika ohlangothini lwakho. Kodwa izingane zingalala noma yikuphi uma zisencane kodwa ngokukhula ziyafundiswa ngalosikompilo. UMama Nomusa Maphumulo yena emzini wakhe usakwenza lokhu ngoba usakholelwa kukho futhi wakhuliswa ngakho ukuthi indawo yomuntu wesilisa yaziwe futhi ihlonishwe ekhaya.
Categories Culture Tags Amasiko esintu, Home, Ikhaya, Traditional customs